Agenda mifandraika amin'ny tsiambaratelo momba ny fifandraisana amin'ny daholobe momba ny solika anglisy
Paikadin'ny fifandraisana miafina an'ny BP
Asabotsy, Jona 5, 2010 Alahady, Aogositra 19, 2012 Douglas Karr
Notaterin'ny filoha Obama tamin'ity herinandro ity fa nanangana dokambarotra 50 tapitrisa dolara i BP. Ny Whitehouse sy ny Filoham-pirenena dia nanao izao hetsika rehetra izao, mitsikera ara-drariny ny orinasa tamin'ny fandaniany vola amin'ny mpisolovava sy mpanao dokambarotra fa tsy mametraka ny vola any an-kafa.
Raha nitsambikina tamin'ny hazakazaka ny haino aman-jery, nanesoeso an'i Tony Hayward an'ny BP izy ireo satria anisan'ny hetsika ara-barotra, resadresaka ary fifandraisana amin'ny besinimaro amin'ny fahitalavitra, an-tsoratra sy an-tserasera. BP aza natomboka a Fantsona Youtube manokana ho an'ny krizy, tsy misy afa tsy Tony Hayward.
Tony Hayward dia efa nanao gaffs goavambe - anisan'izany ny filazany fa tiany fotsiny avereno ny ainy - teny izay nanindrona ny fon'ny mpiasa rig 11 izay very tamin'ny afo tany am-boalohany. Misy ny olona miantso an'i Tony Hayward horoahina, ny sasany aza miantso ny governemanta haka ilay orinasa.
Fa maninona i Tony Hayward no hitohy ho endrik'i BP?
Tsotra be izany raha amin'ny fomba fijerin'ny fifandraisana amin'ny daholobe. BP dia miloka amin'i Tony Hayward mba ho lehilahy latsaka amin'ny marika sy ny orinasa. Ho an'ny taona manaraka na mihoatra, ho hitantsika betsaka i Tony Hayward. Tsy handeha ho aiza izy (raha tsy ity lozisialy ity no mitondra ny lohanteny). BP dia hisoratra anarana aorian'ny krizy - fa eo anelanelan'ny fotoana sy ny fotoana, ny varotra rehetra miaraka amin'i Hayward miaraka aminy, ny resadresaka rehetra atao amin'i Hayward, ny feo maneno rehetra miaraka amin'i Hayward ary ny dokam-barotra rehetra miaraka amin'i Hayward dia mametraka elanelana eo amin'ireo tompon'andraikitra, ny orinasa ary ny tale jeneraliny ankehitriny. .
Amin'ny faran'ny andro dia homena vola be i Tony Hayward noho izy maritiora BP. Mariho ny teniko fa ny parachute platinum izay novolavolaina dieny izao dia hahamenatra ny efitranon'ny orinasa. Na izany aza, dia faly ny handoa izany ny tompon-trosa, satria ny fahafatesan'ny maritiora an'i Hayward dia mety hanimba ny fatiantoka sasany rehefa vita io krizy io. Hiditra ny CEO vaovao, badmouth ny taloha, hamerina hanangana ny orinasa, ary hanomboka hitsentsitra an'arivony tapitrisa avy amin'ny tany indray.
Ny olana dia misy ny kolontsaina sy fitantanana lava ao amin'ny BP izay nahatonga izao loza izao. Efa nanambara ny vavolombelona fa ny fitantanana BP amin'ny sambo solika dia tsy hoe nahalala fotsiny ny olana ara-piarovana, fa nifamaly tamin'ny Transocean (tompon'ny Deepwater Horizon) talohan'ny fipoahana izy ireo. Ny tanjona dia ny hamoahana ny solika haingana araka izay tratra mba hampandehanana ireo dolara… na inona na inona fiarovana. Tony Hayward dia mety ho eo an-tampon'io rojo io, saingy misy maro hafa ao anatin'ny fikambanana izay tompon'andraikitra.
Raha tsy maharikoriko loatra izany dia hetsika fifamindram-bahoaka mamirapiratra izany. Hiverina amin'ny tombom-barotra i BP (na hividianan'ny orinasan-tsolika iray hafa), hisotro ronono manankarena noho izay noeritreretiny i Hayward, tsy ho voafidy intsony ny filoham-pirenena, ary ny mponina ao amin'ny hantsana izay miankina amin'ny harenany voajanahary dia tsy ho sitrana intsony. ny androm-piainany.
BP Logo dia fidirana avy amin'ny fifaninanana BP Logo Design avy amin'ny Logo My Way.
Serivisy ho an'ny mpanjifa mifanohitra amin'ny fanohanan'ny mpanjifa
Engage! Fitsipika ara-barotra sy haino aman-jery sosialy
Jun 8, 2010 ao amin'ny 5: 08 PM
Hitako fa mahaliana kokoa fa mividy ny teny fanalahidy rehetra amin'ny PPC izy ireo. Mitadiava amin'ny Google ny teny fanalahidy mifandraika amin'izany toy ny "oil spill" ary eo ambony indrindra izy ireo. Toa mino izy ireo hoe nahoana ny olona no mamaky vaovao na hevitra avy amin'ny fampahalalam-baovao hafa rehefa afaka manatona sy manazava ny ezaka ataony. Toa tetika tsara.
Jolay 26, 2010 amin'ny 10:14 PM
Mijery @andersoncooper ary toa marina ny tenako… Hitady hahazo $18 tapitrisa i Hayward teo am-pivoahana ny BP.